Mmega ahụ iji wusi uru ahụ nke ụkwụ
Mma nke nwanyị Nlekọta Nlekọta
Ememe ntụrụndụ na-eme ka ọdịmma na obi dịkwuo mma, na-ewepụ mmetụta nke ike ọgwụgwụ, nsogbu nke ike ọgwụgwụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe kwa ụbọchị ma ghara ịdị umengwụ, mgbe ahụ na obere oge, ọ ga-emeziwanye ahụrụ ahụ, na-emetụta ọdịdị ahụ, mmegharị ahụ ga-enwekwu obi ụtọ, dị mma, kwekọọ, meziwanye uru ahụ ma nwee mmetụta dị mma n'ahụ ahụ nke ụkwụ. Ihe omume iji wusi uru nke ukwu ụkwụ, anyị na-amụta site n'akwụkwọ a. Iji nweta mmetụta kasịnụ, ọ dị gị mkpa ịrụ ọrụ ndị a ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'izu, ọ ka mma ime ya kwa ụtụtụ ma ná mgbede, ruo ọtụtụ ọnwa.
Na mbu maka izu 3 mbụ, ịkwesịrị ịmegharị mmega ahụ ọ bụla ma ọ bụ ugboro ise ma ọ bụ ugboro 10, na oge ọbụla na-amụba ọnụ ọgụgụ nke ịbịaru ma na-abawanye ruo ugboro 15 ma ọ bụ 20.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụkwụ gị bụrụ ọdịdị dị mma, ịkwesịrị ịme ka uru nke ụmụ ehi na apata ụkwụ dị ike, mezuo ngwa ngwa na ime mgbanwe nke nkwonkwo ụkwụ na ikpere ụkwụ site n'enyemaka nke mmemme pụrụ iche.
Omume ahụ maka ụkwụ mara mma
1. Dina n'akụkụ aka nri gị, ka ehulata isi gị na aka gị. Mgbe ahụ, anyị na-ebuli aka ekpe aka ekpe, dịka o kwere mee, anyị na-agụta iri. Anyị ga-emeghachi ugboro abụọ ọzọ. Na-eme ụkwụ aka nri.
2. Anyị na-anọ n'otu ọkwa ahụ, anyị ga-agbatị aka anyị n'akụkụ, anyị ga-emechi ụkwụ anyị ma bulie ha n'akụkụ aka nri na ala. Mgbe ahụ, jiri nwayọ ma ọ bụrụ na o kwere omume, anyị ga-emeghe ụkwụ anyị, anyị anaghị adọpụ akụkụ nke elu nke ogwe ahụ site n'ala. Mgbe nke ahụ gasịrị, jiri nwayọọ nwayọọ gafee ụkwụ gị, mgbe ahụ anyị ga-emechi ya. Anyị ga-emeghachi mmegharị niile ugboro iri.
3. Ka anyị nọdụ ala n'ala ma tinye ụkwụ anyị n'otu ebe dị jụụ, aka gbatịa azụ ma guzoro n'ala. Anyị na-ebuli ụkwụ ya n'aka. Buru ume ma gbue ikpere. Ka anyị jiri ụlọnga elongated mee ihe okirikiri. Dụpụ ụkwụ, jiri nwayọọ nwayọọ mee ya. Anyị ga-eme ihe ọ bụla ụkwụ ugboro iri.
4. Anyị ga- ebili ọtọ, anyị na-ejikọta ụkwụ anyị abụọ, anyị na-agbasa ogwe aka anyị n'akụkụ ruo n'ogo. Anyị ga-adọkpụ otu n'ime ụkwụ ụkwụ, tinye ya n'ikiri ụkwụ, wee bulie ya ma belata ya, mee ka mpempe akwụkwọ dị n'okporo ụzọ. Anyị ga-eme ihe ọ bụla ụkwụ ugboro iri.
5. Anyị na-ejikọta ụkwụ anyị, anyị na-agbasa ogwe aka anyị n'akụkụ ruo n'ogo n'ubu. Anyị ga-eburu otu ụkwụ, wee jiri nwayọ na-ebuli ya ruo n'ikpere nke ụkwụ ọzọ, jiri nwayọọ nwayọọ belata ya. Anyị na-eme ihe omume, ụkwụ ụkwụ ọzọ, na-eme ugboro iri.
6. Ka anyị guzoro n'akụkụ anọ ọ bụla, gbatịa aka anyị gbatịrị agbatị n'ihu ma tinye aka anyị n'ala. Anyị ga-akwatu otu ụkwụ, gbanye ya na ikpere, bulie ya elu, ma belata ya. Mee ugboro 10, ụkwụ ọzọ.
7. Anyị na-ejikọta ụkwụ anyị, anyị na-etinye aka anyị n'ihu anyị n'ogo anyị n'ubu, anyị na-ejide aka anyị n'ala. Welie pelvis, gbadaa, n'ejighị otu ụkwụ azụ, jiri nwayọọ nwayọọ bulie ya elu, ma dị ka nwayọ jiri nwayọọ nwayọọ belata ya. Mee ugboro 5, ụkwụ ọzọ.
8. Anyị ga-eme ka aka anyị dị n'ala, ụkwụ kwụ ọtọ. Anyị ga-agbatị otu ụkwụ n'akụkụ, ma jiri nwayọọ nwayọọ bulie ya, egbula ya na ikpere, jiri nwayọọ nwayọọ belata ya. Mee ugboro 10, ụkwụ ọzọ.
9. Anyị na-edina na azụ anyị, anyị na-agbakọ ụkwụ anyị ọnụ, anyị na-agbasa ogwe aka anyị n'akụkụ. Na-ebuli ụkwụ n'ụkwụ aka nri n'ala ma na nke a, anyị ga-ejide ya ruo sekọnd ole na ole, wee jiri nwayọọ nwayọọ belata ha n'ala. Anyị ga-eme ihe omume ahụ ugboro 15.
10. Anyị na-ekesa obere ihe dị n'ala, ma na-anakọta ha na mkpịsị ụkwụ anyị, mmega ahụ kwesịrị ekwesị maka ndị nwere ụkwụ ụkwụ.
11. Ka anyị jiri ụkwụ na-agbago ụkwụ n'ụkwụ, dịka ọmụmaatụ, obere pensụl.
12 . N'ọnọdụ nọ, yiri nke mbụ na azụ ụkwụ, mgbe ahụ, n'ime ụkwụ. Mgbe ahụ anyị na-aga ikiri ụkwụ, mgbe ahụ na mkpịsị ụkwụ.
13. Otu nkeji ma ọ bụ abụọ na-akụda ikiri ụkwụ n'ala. Ihe mmega ahụ dị otú a pụtara na n'ụzọ dị otú a, ị "na-ekesa" lymph na ọbara.
Ihe omume iji weghachite ahụ mmadụ, iji mee ka uru ahụ nke ụkwụ dị ike
1. Ịmalite ọnọdụ - guzo, ụkwụ ọnụ. Anyị na-etinye ụkwụ aka nri na ụkwụ, ma tinye aka ekpe anyị ruo nkwụsị zuru ezu. Anyị na-eme ka a na-agbapụta ụkwụ site n'ikiri ụkwụ, gbanwee ụkwụ. A na-ebufe ahụ dị na mkpịsị ụkwụ, ikiri ụkwụ ahụ dị na ala. Tinyegharịa mmegharị 6 ma ọ bụ 8.
2. Malite na ọnọdụ - eguzo, ụkwụ na-ejikọta na sọks, aka na-anọdụ azụ n'azụ oche ahụ. Na-efu otu, abụọ, were aka ekpe gaa n'akụkụ, na-akwụ ụgwọ nke atọ, anọ ga-alaghachi n'ọnọdụ ahụ. A ga-eji ụkwụ aka nri mee otu a. Anyị na-etinye azụ azụ. Tinyegharịa ugboro 6 ma ọ bụ 8.
3. Ọnọdụ na-amalite na-eguzoro, ụkwụ na-agbakọta na sọks, aka na-ezu ike n'azụ oche ahụ. Mee mkpịsị ụkwụ na mkpịsị ụkwụ gị, na-emetụ aka n'ala ụkwụ. Anyị na-ahapụ azụ azụ, ehulata ala. Anyị na-azaghachi 8 ma ọ bụ ugboro iri.
4. Ọnọdụ na-amalite na-eguzo ọtọ, ụkwụ abụọ. Anyị na-eme obere nzọụkwụ ka ọ bụrụ na anyị na-eje ije nanị ụkwụ ụkwụ na ụkwụ na-agagharị, na apata ụkwụ na-anọgide na-enweghị ihe ọ bụla n'otu oge ahụ. Na-eje ije dị ka o kwere mee.
5. Ebe nmalite - eguzo ọtọ, ụkwụ aka, aka na-ezu ike n'azụ oche. Kuda ikpere anyị, mee ọkara nke ụkwụ ma gbanwee ọzọ. Anyị adịghị adọpụ ụkwụ ụkwụ anyị n'ala, anyị na-echekwa ihu, anyị na-eche na obi erughị ala nke ahụ ụmụ ehi. Tinyegharịa mmega ahụ 6 ma ọ bụ 8.
Ugbu a, anyị maara ihe omume a ga-eme iji wusi uru nke ụkwụ. Ọ bụrụ na a na-eme ha kwa ụbọchị, n'ụzọ dị otú a, ị ga-eme ka uru ahụ nke ụkwụ gị, sikwuo ike ma mee ụkwụ nke ụdị aka.
Ọ na-emerụ emerụ akwa ụkwụ?
Nlekọta na-elekọta ụkwụ na aka
Kedu ihe kwesịrị ịbụ ụkwụ kwesịrị ekwesị?
Ụkwụ, nlekọta ụkwụ mara mma
Deodorant maka ụkwụ na atụmatụ maka iji
Ilekọta maka ụkwụ
Acha akpụkpọ anụ, mgbawa na ikiri ụkwụ
Nri vitamin si strawberry na mango
Uwe - ejiji ma ọ bụghị ọnụ
Ụlọ ọrụ na-ewu ewu na-egosi na ndị ahịa na-azụ ahịa
Anapa maka amụma maka April 2017 site na Hydrometeorological Center
Victoria Bonya mebiri aha ọma Ksenia Sobchak
10 n'ime ụmụ nwanyị kachasị mma n'ụwa
Otu horoscope maka afọ zuru ezu maka ụmụ ehi May
Nri na nnu na nri nwa
Alexei Chumakov, ozi ọma n'ime ndi oru nta akuko
Makarsky gosiri foto mbụ nke nwa nwoke amụrụ ọhụrụ
Na-agba na anụ na agwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ite
Kedu ude dị mma maka akpụkpọ anụ
Kedu ka ndị na-egosi ahụike kwesịrị isi gbanwee mgbe ha na-eleta ịsa
HARCHO ofe na-enweghị anụ
Mkpụrụ osisi maka January 2017: Ụbọchị dị mma maka ịgha mkpụrụ maka tomato maka nri ehihie na ndị na-elekọta ubi
Nlekọta ahụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ maka ịkwa ụkwụ